FIS matahotra ho azo sary
2009-07-30 @ 21:07 in Ankapobeny
Zavatra maro no saiky hosoratana saingy misy ny lasa karazana vaindohan-draharaha kely! Tsy maintsy mitantara na dia fohy ihany ny nahazo ahy ny andron'ny alakamisy 30 jolay ihany manko aho. Rehefa nilaza haka fepetra ingahy Richard raha nahavita filaharambe tampoka ny mpandala ny ara-dalàna dia fantatro avy hatrany fa hisy zavatra hitranga indray eto amin'ny tanàna. Tsy fetsy ny mpandala ny ara-dalàna tamin'ity indray mitoraka ity. Rehefa fantatra fa maro ny miaramila sy zandary niambina an'Anosy sy Analakely dia tokony ho ilay hatrety amin'ny lalambaovao 67ha indray no niaingana, araka ny hevitro; mbola lesoka lehibe eo amin'ny mpitolona mandrakariva ny serasera haingana.
Noho ny raharaha hafa tsy maintsy natao dia tsy afa-namonjy na nijery ny teny Anosy aho. Mandalo an'Analakely ny tena ka nanararaotra naka sary izay azo nalaina teny. Hitako tsara fa karazana ramatahora ihany ny ataon'ireo fiaran'ny FIS miloko mainty fa ilay fiara Toyota fotsy tsy misy laharam-piara iny no mamely tampoka. Izay mihitsy angamba no paikan-dry zalahy ireto. Ny fijeriko azy dia ao anatin'io fiara fotsy tsy misy laharana io mihitsy aza no iaingan'ny baiko ho an-dry zalahy. Noho ny tena tsy manana fitaovam-pifamoivoizana afa-tsy tongotra dia tsy naharaka tsara ny fandehan-javatra teo Antanimena aho (rond-point). Ry zalahy tao anatin'ny Toyota mihitsy anefa no nandraoka, sanatria toa alika romotra, rehefa nahita ny afisy Ravalomanana Marc nentin'olona (renim-pinakaviana) teo. Izy efa rovidrovitra no hitako teny an-tanan'ilay miaramila io ireo afisy. Akaiky loatra aho ka tsy mbola namoaka ny fakantsary. Namonjy teo amin'ny fiantsonan'ny fiara fitaterana aho vao naka sary.
Tratra aoriana fa vao natsipin'ilay miaramila tao aorian'ny fiara indrindra ireo afisy nopotipotehiny fa voapika ilay fakantsary. Niteny ahy ilay rangahy teo anilako fa mbola misy olona enjehin-dry zalahy any amin'ny lalana mankany amin'ny CCESCA any. Nihazakazaka aho haka sary izany hetsika izany, voapika tsinahy indray ilay sary sady takon'ilay miaramila izay zavatra nitranga tao aloha tao. Tsy voafehiko tampoka ny fahamailoana fanaoko. Hay hitan'ily iray manao fanamiana manga ny fakantsariko. Tonga dia nanatona ahy izy no niteny ahy niaraka tamin'ny ompa: " Inona ny sary nalain'ialahy?" (miaraka amin'ny ompa io fa tsy soratana), "ao jerena! alefaso any aloha!" Tsy nampiseho azy izay sary nalaiko aho fa ny fakantsary vonona haka sary fotsiny no nasehoko azy. Tsy nesoriko teny an-tanako mihitsy ny fakantsary na dia navelako hikitikitika hikaroka izay sary nopihako izy. Tsy hainy ny nijery ilay fakantsary (tsy nesoriko tamin'ny tanako mihitsy sady vonona mihitsy aho ny hiaro ny fananako tamin'io fotoana io) dia navelany no sady niteny ahy izy hoe "tadidiko ialahy". Maro ny olona teo no nahita io tranga io.
Lasa aho nankeny amin'ilay fiantsonan'ny fiara indray sady nofafako ny fakantsariko satria tsembo-tanana be ilay miaramilan'ny FIS be kitikitika ny fakantsariko teo. Nifampijery indray izahay. Iny ranamana fa niantso ny namany sady nanondro ahy. Ny olona teo kosa nisy niteny hoe midira anaty bus sady tao an-tsaiko indrindra izay. Dia niditra aho. Hatreo ihany ny fitantarana fa manjary lava resaka indray. Mivoaka tsikelikely eo ny sombintsary tsy hitan-dry zalahy ny nalehany raha tsaratsara ny fifandraisana (efa kely dia kely koa anefa ny fahana ananako)
jentilisa, alakamisy 30 jolay 2009 amin'ny 23:09